Waxa lagu arko Astorga - Magaalo leh halyeeyo badan | Safarka Absolut
Waxa lagu arko Astorga
Susana godoy | | León
Astorga Waa mid kale oo ka mid ah joogsiyada aasaasiga ah, maahan oo kaliya dhanka Camino de Santiago, laakiin wax walba oo magaaladani na tusayso. Waxay ku taal gobolka León, waa bu'da u dhexeysa waxa loogu yeero gobollada Maragatería. Qodob wali sii haya hidaha iyo dhaqanka weyn.
Asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay xero Roman dib ugu soo noqo AC XNUMX-da Waxyar tartiib tartiib tartiib ah ayey u horumartay, iyadoo noqotay xudun weyn oo isgaarsiineed Laga soo bilaabo qarnigii kow iyo tobnaad waxay qaadatay dareen cusub, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kor ku xusan Camino de Santiago. Maanta waxaan sidoo kale sameyn doonnaa waddo, laakiin dhammaan geesahaas oo dhan in magaalo sidan oo kale ah noo oggolaato inaan ku raaxeysto.
1 Duqa magaalada Plaza iyo hoolka magaalada ee Astorga
3 Qasriga Episcopal
4 Darbiga Astorga
5 Wadada Romanka
6 Kaniisada San Bartolomé iyo Santa María
7 Matxafyada Astorga
Duqa magaalada Plaza iyo hoolka magaalada ee Astorga
Mid ka mid ah qodobbada ugu horreeya ee ay tahay inaan booqano waa Plaza Mayor. Laba jibbaaran shukaansi laga bilaabo qarnigii siddeed iyo tobnaad laakiin waa in lagu xisaabtamo inay ku dhisan tahay hadhaagii meeshuu ahaa shirkii Roman. Sidoo kale fagaarahan waxaan ka heli doonnaa dhismayaal muhiim ah sida xarunta dowladda hoose. Iyada oo qaali ah Qaabka BaroqueWaxay leedahay laba munaaradood oo dhaadheer iyo waliba balakoon. Waxaa loo caleemo saaray saacadda tilmaamaysa saacadaha magaalada. Runtii waxaa la sheegay in dhismaha hoolka magaalada la bilaabay qiyaastii 1683. Muddo ka dib, faahfaahinta sida balakoonnada ayaa lagu daray. Intaas waxaa sii dheer, waxaad arki kartaa labo dolls oo u labbisan sida Maragatos iyo gaashaanka magaalada.
Asalkiisu wuxuu soo bilaabmay 1069 laakiin qiyaastii 20 sano ka dib ayaa dib loo dhisay. Waa in la yiraahdaa ilaa qarnigii XNUMXaad waxay lahayd shuqullo iyo fiditaanno kala duwan. Sidaa awgeed waan haystaa Gothic, Renaissance iyo xitaa walxaha Baroque. Waxay leedahay qorshe nooc afargeesle ah oo leh saddex nave. Labada dhinac ee wejiga hore waxaa ku yaal munaarado cajiib ah. Dabcan, gudaha, waxaan sii wadi doonnaa inaan la dhacsanno quruxda meeshan oo kale. Waxay leedahay dhowr cibaado, inkasta oo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uu yahay midka leh sawirka Bikriga Boqortooyada, oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad.
Sanadkii 1886-dii waxaa jiray dab kaas oo Qasrigii hore ee Episcopal uu gabi ahaanba gubay. Marka, mashruuc cusub ayaa la wakiishay oo shaqadiisa bilaabay 1889. Sanado kadib waxaa lagu sameeyay dayactir fara badan laakiin sidaas oo ay tahay, waxay noqotay qodobo kale oo muhiim ah oo lagu arko Astorga. Qasriga waxaa lagu dhisay granite, iyadoo la raacayo qaabka neo-Gothic. Waxay ku leedahay munaarad mid kasta oo ka mid ah dhibcaheeda, sidaas darteed waxaa jira afar la arki karo. Albaabka laga soo galo waa barxad sedex xabad leh. Intaa waxaa dheer, tirooyinka saddex malaa'igood ayaa weli la arki karaa, kuwaas oo ahaa waxaa sameeyay Gaudí.
Ma iloobi karno inaan wax siino socod ku wareegsan aagga derbiga. Magaalada ayaa la sheegay inay wadar ahaan lahayd saddex darbi. Dabcan tani waxay ahayd waqtiyo kala duwan noloshiisa dheer. Midka hore wuxuu ahaa mid difaac ah oo soo bandhigaya moat. Halka kan labaad, oo ku yaal kan hore, uu lahaa laba munaaradood. Midda saddexaad waa ta wali taagan oo sida aan nidhaahno, aan ku raaxeysan karno.
Haddii aan dooneyno inaan si dhab ah u qoyno taariikhda magaalada oo dhan, markaa ma seegi karno waxa loogu yeero Roman Route. Qoditaankeedii ugu horreeyay wuxuu dhacay 1835. Ilaa dhammaadkii qarnigii XNUMXaad, shaqooyin badan oo noocan ah ayaa yimid si ay u soo saaraan dhammaan haraadiga. Tan awgeed, waxaa jira waddo noo ogolaaneysa inaan booqano waxyaabaha laga helo magaalada Astorga. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto ilo biyo kulul, macbudyo, gole ama qolalka.
Kaniisada San Bartolomé iyo Santa María
Es mid ka mid ah kuwa ugu faca weyn magaalada. Waxay ku bilaabatay xilligii jacaylka, markaa waxay leedahay faahfaahin badan oo ku saabsan, laakiin ma aha kuwa keliya. Tan iyo markii ay lahayd dib-u-habeyn dambe iyo iyaga, waxay sidoo kale heshay waxyaabo ka mid ah nooca baroque ama Gothic. Gudaha waxaan ka heli karnaa sawirro sida Virgen del Rosario ama the Virgen de las Angustias.
Dhinaca kale, kaniisada Santa María waxay u heellan tahay ilaaliyaha magaalada. Waxaa la dhisay 1741, laakiin kama aysan soo kicin meel aan jirin, horey waxaa u jiray kaniisad hore. Shaki la'aan, sidoo kale waa mid aad u qiimo badan, oo noo oggolaaneysa inaan ku dhacno, maxaa yeelay si farxad leh ayey kuu la yaabi doontaa.
Dhinaca kale, waxaan haynaa matxafka Roomaanka. Taasi, sidaan horay u soo sheegnay, waxay umuuqataa in dhamaan haraadiga iyo natiijooyinka sidoo kale lagu arki karo meel sidan oo kale ah. Xilli si cad u calaamadeeyay magaaladan iyo sidii oo kale, waxay ahayd in lagu muujiyo siyaabo kala duwan. Laakiin dhinaca kale, waxay kaloo leedahay matxaf aad u macaan.
El matxafka shukulaatada Waxay albaabada u furtay 1994 si loo xuso dhaqankii weynaa ee Astorga ulahaa macmacaan macaan. Waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto hababka wax soo saarka kala duwan afarteeda qol. Waad isku dayi kartaa oo dabcan, guriga u qaado xusuus weyn oo qof walba jeclaan doono. Matxafka cathedral sidoo kale waa mid kale oo ka mid ah jowharadaha goob sidan oo kale ah. Dhexdeeda, waxaa jira shaqooyin fara badan oo farshaxan ah oo waliba ku cajab gelin doona. Marka, booqashada sidan oo kale ah, ma iloobi kartid shukulaatada laakiin sidoo kale ma iloobi kartid rootiyada gaagaaban taas oo dhigaysa qoraalkii ugu macaanaa ee marinkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waxa lagu arko Astorga
Kuala Lumpur Petronas Towers: Laga soo bilaabo Daaraha Malaysia
Maxaa lagu arkaa Morella